Mareykanka: Dhimashada COVID-19 oo Dhaaftay 250,000 - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Mareykanka: Dhimashada COVID-19 oo Dhaaftay 250,000
Mareykanka: Dhimashada COVID-19 oo Dhaaftay 250,000
In ka badan rubuc milyan qof ayaa COVID-19 ugu geeriyootay Mareykanka, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins University oo aruurisa xogaha safmarka coronavirus.
Mareykanka ayaa laga diiwaan geliyay 250,029 oo ruux oo dhimasho ah, waana dalka ugu dhimashada badan caalamka, waxaana xiga dalka Brazil cudurka corona ugu geeriyoodeen 166,699 oo ruux, India oo ku jirta kaalinta sadexaad ayaa dhimshada waxay maraysaa 130,993 oo ruux halka Mexico 99,026 qof u dhinteen safmarka coronavirus.
Madaxweyne Donald Trump oo had iyo jeer hoos u dhigay khatarta cudurka ayaa isu soo bax ka sheegay in doorashadii sadexda bishan ka dhacday Mareykanka uu ku guul dareystay Joe Biden.
Trump wuu diiday in uu qirtay in tartanka looga adkaaday maamulkiisana waxaa ay isku dayayaan in ay hor istaagaan xil wareejinta isagoo adeegsanaya hanaanka garsoorka wadanka Mareykanka.
Arbacadii, madaxweynaha la doortay Joe Biden waxaa uu ka dhigay, “ Ma heysano waxyaabo badan oo aan kaga hor tagno sida qalabka la isaga ilaaliyo tallaalka COVID-19.
Biden ayaa sidoo kale sheegay in faafitaanka cudurka hoos u dhigayso haddii loo ogaansamo tilmaamaha caafimaadka, sida kala fogaanshaha, xirashada af-xirka iyo tilmaamaha kale.
Magaalada New York waxaa la xirey dugsiyada si loo xakameeyo faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus.
Mareykanka arbacadii, waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 1,000 qof oo dhimasho ah iyo 150,000 oo kiisas cusub ah.
Biden ayaa shacabka Mareykanka ka codsaday in ay xirtaan af-xirka isla markaan ku dedaalaan kala fogaanshaha ilaa laga soo saarayo tallaal rasmi ah.
Previous articleLaacib Maxamed saalax oo mar kale laga helay Feyriska Corona
Next articleImaaraadka Carabta oo xayiraad kusoo rogay dalal ay ku jirto Soomaaliya